နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: July 2011
P for Pork : ဝက်သားတုတ်ထိုး
မြန်ကောင်းသက်သာလွယ်ကူ အိမ်လုပ် ဝက်သားတုတ်ထိုး။
၆။ ဂျင်း (လက်နှစ်ဆစ်။)
၇။ ပါကော်ရှားကော ၃-၄ပွင့်ခန့်။
၈။ သကြား။ (လက်ဘက်ရည်ဇွန်းကြီး ၃ဇွန်းခန့်)
၉။ ဆား (အနေတော်)
၁၀။ အချိုမှုန့် (အနေတော်။)
၁၁။ ကြက်သွန်ဖြူ (ခပ်စိပ်စိပ်လေး)
၁၂။ ငရုတ်သီး နီ/စိမ်း (ခပ်စိပ်စိပ် စိပ်ပေးပါ။)
၁၃။ Sin Sin တံဆိပ် ငရုတ်ဆီ။
၁၄။ ထန်းလျက် (၃-၄ ခဲ။)
ထန်းလျက်ကို ကျိုပေးပါ။ ပွက်ပွက်ဆူလာရင် မီးဖိုပေါ်က ချလို့ရပါပြီ။
ထန်းလျက် ကျိုနေတုန်း ....
အူချိုကို အဝနှစ်ဖက်စလုံး နှီးနဲ့ချည်ပေးပါ။
အပြင်ပိုင်းပဲ ဆန်ဆေးရည်နဲ့ သေချာဆေးရင် ရပါတယ်။
အူနု/မကြီး ကို ဆန်ဆေးရည်နဲ့ သေချာဆေးပါ။
အတွင်းအပြင်လှန်လိုက်ပြီး သံပုရာသီးနဲ့ ညစ်ပွတ်ပေးပါ။
အသည်း၊ လျှာကိုတော့ အနေတော် အတုံးကြီးတွေ ဖြစ်အောင် လှီးပြီးရေစင်စင်ဆေးပါ။
ဂျင်းကို ခပ်ပါးပါးလေး လှီးပေးပါ။
ဆားအချိုမှုန့် ကြိုက်သလောက် ထည်ပါ့။
ကလီစာတွေ အသားတွေ ထည့်ပေးပါ။
ရေကို ကလီစာတွေ မြုပ်ရုံထည့်ပေးပါ။
နောက် အိုးကို မီးဖိုပေါ်တင်လိုက်ပါ။
မီးအနေတော်လေးနဲ့ ပြုတ်ပေးပါ။ (လျှာတို့ နားရွက်တို့ သေချာကျက်အောင်ပါ။)
နူးမနူး တူလေးနဲ့ အသာထိုးကြည့်ပါ။
လက်ညိုးနဲ့ ဖျစ်ရင် လက်ပူလောင်မှာပေါ့....။
နားရွက်က နူးလွန်းရင် အပြင်နားက အရည်ခွံပုံပျက်တတ်လို့ အနူးမလွန်ပါစေနဲ့၊
ကြက်သွန်ဖြူကို စိပ်စိပ်လေး စိပ်ပေးပါ။
ငရုတ်သီးတောင့်တွေလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ စိပ်ပေးပါ။
ထန်းလျက်ကျိုတာ အရည်ကျလာပြီဆို ငရုတ်ဆီနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူစိပ်၊ ငရုတ်သီးစိပ်တွေနဲ့ ရောပေးပါ။
သံပရာညစ်ပေးပါ။ အရသာ ကိုယ်လိုသလို ချိန်ပေးပေါ့။
ကျွန်တော်တော့ နည်းနည်း ခပ်ချဉ်ချဉ်လုပ်ပေးတယ်။
ပြင်တာ ဆေးတာ ခုတ်ထစ်တာ နာရီဝက်ပဲ ကြာတယ်။
ပြုတ်တာတော့ နည်းနည်းကြာတယ်။ ကျွန်တော် ၁ နာရီခွဲလောက် ထားလိုက်တယ်။
စာကြွင်း။ ။ ယုံလားတော့ မသိဘူး။ တုတ်ထိုး မစားဖြစ်တာ နှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:56 PM9ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
New Look on iPad 2
ရေးသားသူ Ko Boyz at 5:39 PM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: apple, iOS 4, ipad, ipad 2
Why and What to do after JailBreak iPad 2
မနေ့ကတော့ ချစ်မိတ်ဆွေတို့တစ်တွေ မိမိတို့ရဲ့ iPad2ကို ဝမ်းပန်းတစ်သာ ပျော်ရွှင်စွာ ထောင်ဖောက်ပြီးကြကုန်ပြီ ထင်ပါတယ်။
အောင်မြင်စွာ ထောင်ဖောက်ပြီးသူများကို ထောင်ဖောက်သူများ အသိုင်းအဝန်းကနေ နွေးထွေးလှိုက်လှဲ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အတိုင်းမသိ သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ (လက်ခုပ်တီးပေးကြပါ။ ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်း)
ကဲ .... ကျွန်တော်တို့ ဒီ ကိုComex ရဲ့ Jailbreakme 3.0 ကို သုံးပြီး ထောင်ဖောက်တာ ဘယ်လောက်လွယ်တယ်ဆိုတာ သိခဲ့ကြပြီ မဟုတ်လား။ အိုင်ပက်ထဲက ဆာဖာရီလေးကိုဖွင့်၊ ပေးထားတဲ့ လင့်ခ်ကို သွား၊ ခလုတ်လေး တစ်ချက်၊ နှစ်ချက်လောက် နှိပ်လိုက်တာနဲ့ တန်ဒန့်တန်း ဆိုပြီး အပ်ချလောင်းနဲ့ ထောင်ဖောက်ပြီးသွားတယ်။ မကောင်းလား။ မလွယ်လား...။
အရင်က ကျွန်တော်တို့ သုံးခဲ့တဲ့ နှင်းပွင့်နီ(RedSnow)တို့၊ သံပုရာမိုး(Limerain)တို့၊ အဆိပ်စိမ်း(GreenPoison)တို့နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အတော်ကို လွယ်ကူသက်သာတဲ့ ထောင်ဖောက်နည်းပါ။ နှင်းပွင့်နီနဲ့ သုံးပြီး ထောင်ဖောက်မယ်ဆိုရင် ပထမ DFU mode ဆိုတာ သိရမယ်။ Recovery mode ကို ရအောင် ဖုန်းရဲ့ Home Button နဲ့ power button ကို ဘယ်နှစ်စက္ကန့်ကြာအောင် နှိပ်ပြီး ဘယ်လောက်ကြာမှ ပါဝါ ခလုတ်ကို လွှတ်ပါ။ Home Button ကို ၁၀ စက္ကန့်လောက် ဆက်ဖိထားပါ ဘာညာဆိုပြီး ဇယား အတော် ရှုပ်ခဲ့တယ်ကလား...။
ဒါတောင် အနှိပ်မတော် အဖိမတော်ရင် ဖုန်းက DFU mode မဟုတ်ပဲ Recover mode ဖြစ်သွားလို့ error 1505 တွေ ပေါ်လာတာတွေ..... အိုင်ဖုန်းမှာ ပန်းသီးပုံလေးပဲ ပေါ်ပြီး ငုတ်တုတ် ဒီအတိုင်း ဖြစ်နေလို့ အမောင်ကယ်ပါ ကိုယူပါ ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေလဲ မနည်းတော့ပါဘူး။ ခုတော့ ဒီ jailbreakme 3.0 ကျေးဇူးကြောင့် ခလုတ်လေး တစ်ချက် နှစ်ချက် ကလစ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ လွယ်ကူသက်သာ မြန်ကောင်းချောမွေ့ ထောင်ဖောက်နိုင်ပါပြီ။
ကဲ...။ ကျွန်တော်က ပြောလို့ ထောင်ဖောက်တယ်တဲ့။ ဘာလို့ ထောင်ဖောက်ကြလဲ။ (ဟမ်... သူပဲ ဖောက်ခိုင်းပြိးတော့ သများ ပြန်လာမေးနေသေးတယ်။ ဘူးဟူးဟူးဟူး...)
ပုံမှန်ဆိုရင် ပန်းသီးက သူ့အိုင်ထုတ်ကုန်တွေကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိသာ အသုံးချခွင့် ပေးထားပါတယ်။ Fully Functional ဖြစ်အောင် သူခွင့်မပြုထားပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက သူ့ထုတ်ကုန်မှာ၊ Apps Store မှာ apps တွေ ထည့်ချင်တယ် သုံးချင်တယ်ဆိုရင် သူခွင့်ပြုတဲ့ apps တွေကိုမှ Install လုပ်ခွင့် ပေးပါတယ်။
ဒါတော်တော်ဆိုးပါတယ်။ အရမ်းကို ဆိုးပါတယ်။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကို ဆိုးရွားပါတယ်။ (ခေါင်းခါလျက်)
ဒါဟာ မိုနိုပိုလီ လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Anti-Trust နဲ့လဲ ငြိနေပါတယ်။ (ပန်းသီးဟာ Anti-Trust နဲ့ ပါတ်သက်လို့ ငြိစွန်းမှု ရှိမရှိကို ဥပဒေပညာရှင်များက လေ့လာနေပါတယ်။)
ပန်းသီးက သူ့ Apps Store မှာ တင်ရောင်းနိုင်မယ့် apps တစ်ခု ဖြစ်ဖို့ အောက်က အချက်တွေနဲ့ အနည်းဆုံး ကိုက်ညီရပါမယ်။
သူ့ကို apps တစ်ခုရောင်းရတိုင်း ၃၀% ကော်မရှင်ပေးရမယ်။
ပန်းသီးက ထုတ်ခဲ့တဲ့၊ ထုတ်မယ့် apps တွေနဲ့ မတူရဘူး။ (ဒါကတော့ လူလည်ကျလွန်းတယ်။ သူမထုတ်သေးတဲ့ apps ကို ဘယ်လိုလုပ် သိနိုင်မှာလဲ။ အခုတစ်လောတင် ပြဿနာ တက်နေတယ်။ Wifi-Sync ဆိုတဲ့ apps ဟာ Apps Store မှာ တင်ချခွင့် မရပါဘူး။ အခုတော့ Cydia Store မှာ လက်မလည်အောင် ရောင်းနေရပါတယ်။ ပန်းသီး လူလည်ကျတာကတော့ နောက်ထုတ်မယ့် iOS5ထဲမှာ အဲဒီ Wifi-Sync လို ဆန်ဆန် function တစ်ခု ထည့်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ apps ထွင်တဲ့ တစ်ယောက် ဦးနှောက် ဖောက်ခံလိုက်ရလား ဆိုတာတော့ ပန်းသီးဖက်ကပဲ သိပါလိမ့်မယ်။)
ပန်းသီးအင်္ဂျင်နီယာတွေ စမ်းသပ်ပြီး approve ဖြစ်မှ ရပါတယ်။
အဲဒီအချက်တွေကြောင့် တစ်ချို့သော apps ကောင်းအများစုဟာ Apps Store မှာ တင်ခွင့် မရလိုက်ကြပါ။ ဒီအခါမှာ apps developer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Saurik ဟာ ပန်းသီးရဲ့ Apps Store ကဲ့သို့သော Store တစ်ခုကို ထောင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ထောင်ဖောက်သူများ အကြား ရေပန်းစားတဲ့ Cydia Store ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းသီးက ခွင့်မပြုတဲ့ apps တွေဟာ အဆိုပါ Cydia Store မှာ တင်ရောင်းကြပါတယ်။ ဒီ Cydia Store က apps တွေကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် မိမိတို့ရဲ့ iDevices ကို ထောင်ဖောက်မှသာ အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။ ပန်းသီးက Cydia Store ကို သူ့ရဲ့ Apps Store ထဲ အတင် မခံတဲ့ အတွက် Install လုပ်လို့ မရပါ။ ထောင်ဖောက်မှသာ Cydia Store ကို Install သုံးပြီး လုပ်ရတာပါ။
ဒါကတော့ ပန်းသီးက ခွင့်မပြုလိုက်ပေမယ့် User တွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ apps တွေကို သုံးနိုင်ဖို့အတွက် ထောင်ဖောက်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ပန်းသီးထုတ်ကုန်တွေ အကုန်လုံးကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင် ကွန်ပြူတာနဲ့ iTunes ကနေတစ်ဆင့် လုပ်ရပါတယ်။ ဒါဟာ အတော်ကို ဆိုးဝါးပါတယ်။ Sync လုပ်တယ်ဆိုတာ မသိတဲ့သူ လုပ်မိရင် မိမိတို့ရဲ့ iDevices ထဲက ဖိုင်တွေ၊ ဒေတာတွေ၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေ၊ အရေးကြီး မှတ်တမ်းတွေ ဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပန်းသီး ပစ္စည်းတွေ စစသုံးတုန်းကဆို သွင်းထားတဲ့ သီချင်းတွေ၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေ ပျောက်ပျောက်ကုန်ပါတယ်။ နောက်မှ နည်းနည်းပါးပါး နားလည်လာတော့မှ အဲဒီဒဏ်တွေက သက်သာတာပါ။
ဆိုတော့... ဖုန်းကို ထောင်ဖောက်လိုက်ရင် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကတော့ iFile သို့မဟုတ် iFunBox ဆိုတာကို သုံးပြီးတော့ ဖုန်းရဲ့ Charging port နဲ့ ကွန်ပြူတာရဲ့ USB port ကို သွယ်ပြီး ဒေတာတွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေကို လွယ်လင့်တကူ Drag and Drop လွဲပြောင်းကူးယူမှုတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အိုင်ကျွန်းဆိုတာ ဖုန်းကို ရီစတိုး လုပ်ချင်မှ ဒါမှမဟုတ် iOS Version အသစ်ကို မြှင့်ချင်မှပဲ အသုံးပြုရမယ့် အဆင့်ကို ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
အထက်က ရေးခဲ့တာတွေကတော့ ကျွန်တော် နားလည်သလောက် သိသလောက်တွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာ ထောင်ဖောက်ခြင်း အကျိုးကျေးဇူးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ အိုင်တီ လက်တက်လူငယ်များရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ထောင်ဖောက်တဲ့ ဆော့ဝဲတွေ အများကြီး ပေါ်လာပါပြီ။ သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ခက်တာတွေ ရှိသလို လွယ်တာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ အလွယ်ဆုံးကတော့ အခု နောက်ဆုံး အိုင်ပက်တူးကိုပါ ထောင်ဖောက်လို့ရတဲ့ ကိုကောမက်ရဲ့ Jailbreakme 3.0 ပါပဲ။ သူ့ကို Untethered Jailbreak လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ထောင်ဖောက်ပြီး နောက်ပိုင်း ဖုန်းကို ပါဝါ ပြန်ဖွင့်တဲ့ အခါမှာ နောက်ထပ်တစ်ခါ ကွန်ပြူတာနဲ့ ချိတ်ပြီး ထောင်ဖောက်ပေးဖို့ မလိုတာကို ပြောတာပါ။ နှင်းနီတို့၊ သံပုရာမိုးတို့ဟာ ဗားရှင်းအဟောင်းတုန်းကဆို အဲလို ကွန်ပြူတာနဲ့ ပြန်ပြန်ချိတ်ပြီး ထောင်ပြန်ဖောက်ပေးရတဲ့ သာဓကတွေ ရှိပါတယ်။ အဲလို ထောင်ဖောက်တာမျိုးကိုတော့ Tethered Jailbreak လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Jailbreakme 3.0 ဆော့ဖ်ဝဲ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ ရိုးရှင်းလွန်းလို့ ဗိုင်းရပ်စ်လို့ ဆိုရမယ့် malicius program တွေတောင် သူ့နည်းအသုံးပြုပြီး iDevices တွေကို ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ Apple iOS ဟာ စထုတ်ကတည်းက ပြစ်ချက်တွေနဲ့ မကင်းခဲ့ပါဘူး။ လုံခြုံရေးဟာကွက်၊ ယိုကွက်တွေနဲ့ ပြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ပန်းသီးက သူ့အိုအက်စ်တွေကို အခါအားလျော်စွာ patch တွေထုတ်ပြီး မူလ အိုအက်စ်ထဲ ထည့်ပေါင်းပြီးတော့ အိုအက်စ်အသစ် ထုတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ယိုပေါက်တွေ လုံခြုံရေးအားနည်းချက်တွေကို ဖာထေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် iOS 3.1.3 အထိ ပါလာတဲ့ ယိုကွက်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကလဲ Comex က အဲဒီ ယိုပေါက်တွေထဲက တစ်ခုကို အသုံးချပြီး iOS 3.1.3 ကို ထောင်ဖောက်ပေးနိုင်တဲ့ Jailbreakme 2.0 ကို ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီယိုကွက်ကို PDF Exploit လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Comex က အဲလို ယိုကွက် PDF exploit ကို အများကြီး တွေ့ထားပါတယ်။ Jailbreakeme 2.0 မှာ ယိုကွက်တွေထဲက တစ်ခုက သုံးပြီး ပန်းသီး System ထဲကို ဝင်ရောက်ကာ ဖိုင်တစ်ချို့ကို ပြန်ပြင်ရေးခြင်းဖြင့် iDevices တွေကို ထောင်ဖောက်နိုင်အောင် လုပ်ပေးတာပါ။ အဲဒီတုန်းက Comex က သူသုံးခဲ့တဲ့ exploit ကနေ တစ်ဆင့် တစ်ခြား မသမာတဲ့ hacker တွေက အသုံးချမှာကို ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ PDF Patch တစ်ခုကို ထပ်မံ ထုတ်လိုက်ပြီး ထောင်ဖောက်တဲ့ ဖုန်းတွေတိုင်း အဆိုပါ patch ကို မဖြစ်မနေ Download လုပ်ပြီး မိမိစက်ထဲက ယိုကွက်ကို ပိတ်အောင် တိုက်တွန်းပေးခဲ့ပါတယ်။
ပန်းသီးကလဲ Comex သုံးခဲ့တဲ့ ယိုပေါက်ကို သူတို့နည်း သူတို့ဟန်နဲ့ ပြန်ပိတ်ပြီး နောက်ထွက်တဲ့ iOS တွေမှာ ဖြည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် exploit အဟောင်းကို သုံးခဲ့တဲ့ Comex ရဲ့ Jailbreakme 2.0 ဟာ iOS အသစ်တွေမှာ အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။
ဒါတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အဲတုန်းက ထောင်မဖောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖုန်းတွေဟာ exploit တွေနဲ့ ပြည့်နေခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ဘယ်လောက် vulnerable ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သတိထားမိရင် အတော်ကြောက်ဖို့ ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ (လတ်တလောမှာတော့ ပန်းသီးအတွက် ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ iKee လို့ခေါ်တဲ့ အန္တရာယ်မရှိတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုပဲ ရှိပါသေးတယ်။)
ပန်းသီးကလဲ တတ်နိုင်သလောက် သူ့ iOS တွေထဲက exploit တွေကို ရှာပြီး ပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပိတ်သလောက် iOS တွေကိုလဲ ခဏခဏ အဆင်မြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ Comex လဲ သူတွေ့ထားတဲ့ ယိုကွက်တွေထဲက တစ်ခုခုကို သုံးပြီး ထောင်ဖောက်မယ့် ဆော့ဖ်ဝဲ အသစ်ကို ရေးပါတယ်။ ရေးရင်းနဲ့ ပန်းသီးက သူသုံးနေတဲ့ ယိုကွက်ကို ပြန်ဖာထေးတဲ့ iOS ထုတ်လိုက်ပြန်ပြီဆို သူ့အနေနဲ့ နောက်ထပ် ယိုကွက်တစ်ခုက ထုတ်သုံးပြီး ရေးရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ဆော့ဖ်ဝဲက အချိန်ကြာသွားတာ ဖြစ်တယ်။ အခုထုတ်လိုက်တဲ့ Jailbreakme 3.0 တောင် မတတ်သာလို့ ထုတ်လိုက်ရတာပါ။ သူရေးနေတာ ကြာလွန်းလို့ မစောင့်နိုင်တဲ့ hacker တစ်ယောက်က ကောမက် ဆာဗာပေါ် တင်ထားတဲ့ စမ်းသပ်ဆဲ အဆင့် ရှိတဲ့ Beta Version ဖြစ်တဲ့ Jailbreakme ဆော့ဖ်ဝဲကို ခိုးယူပြီး အွန်လိုင်းပေါ်ကို ဖြန့်လိုက်တာကြောင့် သူ့ရဲ့ မပြီးသေးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲကို အချောသတ်လိုက်ရတာပါ။ အခုဆော့ဖ်ဝဲက iOS 4.3.3 ကိုပဲ support လုပ်ထားပြီး ကျန်တဲ့ အဟောင်းတွေကို ထောင်ဖောက်လို့ မရပါဘူး။ နောက်မှပဲ သူပြန် update လုပ်ပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာလို့ သူအလောတစ်ကြီး ထုတ်ပေးလိုက်လဲ ဆိုတော့ hacker က ရသွားတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲထဲမှာ သူသုံးထားတဲ့ exploit ပါနေတာကြောင့် ပန်းသီးက အဲဒီ exploit ကို ဖာထေးလိုက်ရင် သူ့ အလုပ်တွေ အလဟဿ ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပန်းသီးက အဲဒီ အပေါက်ကို ဖာတဲ့ iOS မထုတ်ခင် သူ့ဆော့ဖ်ဝဲကို ထုတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် သူတွေ့ထားတဲ့ exploit တွေ waste မဖြစ်ပဲ ထောင်ဖောက်နိုင်တော့တာပေါ့။
အခု exploit က PDF Exploit လို့ သိရပါတယ်...။ အဲဒီ exploit က ဆာဖာရီ ဘရောက်ဇာကနေတစ်ဆင့် သွားလို့ရပြီး apple file system တွေထဲကို မွေနှောက်နိုင်လောက်အောင် vulnerable ဖြစ်တဲ့ exploit ဖြစ်ပါတယ်။ မသမာသူများ အဲဒီ ယိုပေါက်ကို သုံးပြီး ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို ကိုယ်မသိအောင် ထည့်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Comex က Jailbreame 3.0 ကို ထုတ်ပြီးပြီးချင်းပဲ အဲဒီ exploit ကို ပြန်ဖာထေးတဲ့ PDF Patcher2 ဆိုတာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြန့်လိုက်ပါတယ်။ ထောင်ဖောက်ပြီးသူများ အဆိုပါ patch ကို အသုံးပြုပြီး အခု လူတိုင်း သိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ exploit ကို အမြန်ဆုံးဖာထေးကြပါ။
အဆိုပါ patch ကို အသုံးပြုဖို့က မိမိတို့ရဲ့ iDevices ကို ထောင်ဖောက်မှသာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ထောင်မဖောက်ရသေးတဲ့ iDevices တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့လို ဖောက်ပြီးသား သမား များထက် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမယ့်လမ်း ပိုများနေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့မှာ အဲဒီ အပေါက်ကို ဖာဖို့က လမ်းနှစ်လမ်းပဲ ရှိပါတယ်။ မဖာပဲ နေလိုက်ရင် သူတို့ ဆာဖာရီကနေတစ်ဆင့် သွားတတ်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ကူးစက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ထောင်မဖောက်ရသေးတဲ့ iDevices ပိုင်ရှင်များ ရေးရမယ့် လမ်းနှစ်လမ်းကတော့
၁။ Jailbreakme 3.0 ကို သုံးပြီး ထောင်ဖောက်ပါ။ ပြီးတော့ PDF Patcher2နဲ့ exploit တွေကို ဖာပါ။
၂။ ပန်းသီးကပဲ အဆိုပါ ယိုကွက်တွေကို ပြန်fix ပေးမယ့် iOS Version ထွက်လာတဲ့ အထိ စောင့်ပါ။ (ဒီကြားထဲတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခြင်း မခံရအောင် သတိထားဖို့တော့ လိုတာပေါ့လေ။)
PDF Patcher2ရယူနည်းကတော့ Cydia ထဲက Search ကို အသုံးပြုပြီး PDF Patcher2 ဆိုတာ ရှာလိုက်ပါ။ တွေ့လာရင် အင်စတော လုပ်လိုက်တာနဲ့ အလိုအလျောက် exploit တွေကို ဖာထေးပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘလော့ရ်ဖတ်လာ မိတ်သဟာ အပေါင်း ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေသောဝ်။
စာကြွင်း ၁။ ။ ဘလော့ မရေးတာ ကြာလို့ ရေးဖြစ်အောင် တိုက်တွန်းပေးတဲ့ အသည်းလေးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတိုက်တွန်းလို့ ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်တာပါ။ ရေးရင်းနဲ့မှ exploit ဖာထေးဖို့ ကိစ္စ ဟာ အတော် အရေးကြီးမှန်း သိလို့ ပို့စ် အရှည်ကြီး ရေးလိုက်တာပါ။ သူ့ကို ကျေးဇူးတင်ကြပါ။ :P
စာကြွင်း ၂။ ။ ထောင်မဖောက်ရသေးတဲ့ တစ်ခြားသော အိုင်ဖုန်း အိုင်ပေါ့တ် အိုင်ပက် ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ ကျွန်တော့်ဘလော့ကို ဖတ်မရ ပြုမရ ဖြစ်မှာ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ စေတန်ဂေါ့ဒ် ရေးပေးတဲ့ Embedded Web Font ကို အသုံးပြုပြီး ကျွန်တော့်ဘလော့ကို ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ထောင်မဖောက်ထားတဲ့၊ ဇော်ဂျီဖွန့်သွင်းမထားတဲ့ iDevices တွေနဲ့လဲ ကျွန်တော့်ဘလော့ကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူ ဇော်ဂျီဖွန့် မသွင်းထားတဲ့ ကွန်ပြူတာကနေလဲ ကျွန်တော့ ဘလော့ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးလိုက်ပါတယ်။
စာကြွင်း ၃။ ။ ဒီဘလော့ကို Mobile Version အနေနဲ့လဲ လွယ်လင့်တကူ သက်သာစွာ ကြည့်နိုင်အောင် စီစဉ်ထားပါတယ်။ Mobile Version မှာတော့ မူလ Web Version လို ဘေးနား side bar တွေနားက Feed Roll တွေ... နောက် ဘလော့အောက်ခြေနားက CBox တွေ မြင်တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီဟာတွေ မြင်ချင်တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင် မိမိတို့ရဲ့ Mobile Version စာမျက်နှာရဲ့ အောက်ခြေနားကနေ Web Version ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ကွန်ပြူတာထဲကနေ ကြည့်ရသလို Web စာမျက်နှာ အပြည့် ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် စာလုံးတွေ သေးသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအတွက် Zoom ချဲ့ပြီး ကြည့်ကြပါဗျား...။ (ဟယ် ဆိုဒ်ဘားနားက ငွေလဲနှုန်းကို မျက်စေ့ ရောက်သွားတာ ကနေ့ ၆၄၉ ကျပ်တဲ့။ ကျသွားပြန်ပြီ။ :( )
ပေးထားချက် ။ ပုံပါအတိုင်း
မေးခွန်း ။ ။ ဤ ပုံတွင် ပန်းသီးက ခွင့်ပြုသော apps အရေအတွက်နှင့် ခွင့်မပြုသော apps အရေအတွက် ကို ဖော်ပြပါ။ (၅ မှတ်.. လွယ်လွန်းလို့။ မှန်ရင် အဲ့ထဲက တစ်ခုကို ထည့်သွင်းနည်း အသုံးပြုနည်း ပို့စ်တစ်ခုတင်ပေးမယ်။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:31 PM9ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: apple, iDevice, ipad, ipad 2, iPhone, iPhone 3GS, jailbreak, jailbreakme 3.0, virus
iPad2ကို JailBreak လုပ်ရအောင်
မကြောက်ပါနဲ့။ ထောင်မဖောက်မီတုန်းက တင်ထားတဲ့ iPad2Lock Screen ပုံလေးပါ။
iPad2အတွက် Jailbreak လုပ်လို့ရတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲကို ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့က ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
အိုင်ဖုန်းကို အောင်မြင်အောင် ထောင်ဖောက်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ Hacker ဆရာကြီး Comex ရဲ့ Jailbreakme 3.0 နဲ့ မိမိတို့ရဲ့ iPad2 4.3.3 ကို ထောင်ဖောက်နိုင်ပါပြီ။
မိမိတို့ရဲ့ iPad2မှာ ရှိတဲ့ Safari Browser ကနေပြီးတော့ အောက်ပါလိပ်စာအတိုင်း သွားလိုက်ပါ။
အဲဒီနောက် Cydia ဆိုတဲ့ လိုဂိုအောက်နားက Free ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
အဲဒီခလုတ်လေးက Install ဆိုတာ ပြောင်းသွားရင် အဲဒီ Install ခလုတ်ကို ထပ်နှိပ်လိုက်ပါ။ ကျန်တာတွေကတော့ သူ့အလိုအလျောက် ထောင်ဖောက်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးမှာ အောက်က ပုံအတိုင်း ကိုယ့် စကရင်မှာ Cydia ဆိုတဲ့ apps store တစ်ခု ကိုယ့်အိုင်ပက်မှာ ပေါ်လာရင် ထောင်ဖောက်တာ အောင်မြင်သွားပြီလို့ ဆိုရပါပြီ။
နောက်မှ အသေးစိတ် ထပ်ရေးပေးပါမယ်။
လောလောဆယ် ထောင်ဖောက်ထားတာကို ကလိ လိုက်ပါဦးမယ်။
အကယ်၍ မိမိကိုယ်တိုင် ထောင်ဖောက်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ပါလင်ခ့်များက ကျူတိုရီရယ်များကို အသုံးချပြီး ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။
စာကြွင်း။ ။ ဒါလေးက ကျွန်တော့် LockScreen ပုံပါ။ အသည်းလေးက သူ့ပုံတင်ထားတာ ရှက်တယ်ဆိုလို့.. ကာတွန်းပုံနဲ့ အစားထိုးလိုက်တာ။ ဘယ်ကားထဲက ပုံလဲဖြေပါ (၁၅ မှတ်)။
Thanks for iPad, Honey.
All software credits, photo credits go to respective owner.
အကယ်၍ လက်တွေ့မှ မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က ယူထုက ကျူတုရီရယ်ပုံကို ကြည့်ပါလေ။
Credit to iClarified
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:20 PM7ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: 4.3.3, apple, iOS 4, ipad, ipad 2, jailbreak, jailbreakme 3.0